OEM Leather Mabhegi, Backpack Mabhegi Mugadziri | Gaofeng
Iyo fekitori inotarisana nekugadzira machira Kwemakore makumi maviri nerudo uye nyanzvi.
20 Makore makumi maviri
Inotungamira mukugadzirwa kwemhando dzese dzematehwe uye zvigadzirwa zvematehwe, inyanzvi mukupa
inoshandurwa OEM masevhisi kune vatengi.
Professional Handbag miriwo yakasarudzika yemagineti yemagetsi yekuvhara vagadziri
Chikwama miriwo yakachinjika yemateya emagineti kuvharwa https://gfbags.com
China Briefcase nylon machira emuchina wekuzevha bhizinesi muhomwe vanogadzira-
Bhurukwa nylon machira yakawandisa bhizinesi bhegi https://gfbags.com
Yakanakisa Mutumwa Mabhegi nylon machira kushongedza ane ganda Supporter
Yakanakisa Mutumwa Mabhegi nylon machira kushongedza ane ganda Supporter. Messenger Mabhegi nylon machira kushongedzwa nematehwe Mushure memakore ekuongorora uye kudzidzira, Shenzhen Gaofeng mabhegi Co, Ltd. yakagadzira yakakwana kunaka kudzora maitiro. Ichi chigadzirwa chinoita kuti basa rive nyore uye rinoderedza kukosha kwekushandisa vanhu vazhinji. Izvi zvakakonzera kudzikiswa kwemutengo wevashandi. Messenger Mabhegi nylon machira kushongedza pamwe nehwehwe Ichi chigadzirwa chakachengeteka kushandisa. Iko hakuna madhiraini ane chepfu uye vamiririri vari kushandiswa muzvimiro zvavo kana zvigadzirwa panguva yekugadzira.
China Handbag Tinosimudza tuta microfiber yegandavhara yekuvhara vagadziri-
Chikwama Chikwama tinobata microfiber yevhara yemavharo yekuvhara https://gfbags.com
Kukurukura pre-hurukuro yekugadzirwa
Kunyangwe paine musangano wepamberi pekugadzirwa, asi imwe neimwe nzira isati yaitwa, isu tichine hurukuro diki, kusanganisira yekuita basa rekugadzira nekunyatso, nzira yekucheka zvinyorwa zvichave zvakanyanya kuchengetedza zvinhu, matambudziko api atinogona kusangana nawo mukugadzirwa matanho, tinofanirwa kutora ese nyaya tichifunga. Musangano wepamberi pekugadzirwa unotarisa pane zvese zvekugadzira, uye iyi nhaurirano diki inotariswa kune imwe neimwe yekugadzira yekugadzira, uye nyaya dzavanokurukura dzichawedzera kutsanangurwa.
Yako dhizaini kana sampuru kana mazano, Feasibility Study, simudza chirongwa chekuvandudza;
Sarudza zvigadzirwa, ruvara, uye logo kugadzirisa nzira;
Kugadzira sampuro, 5.1 Kutumira sampure yekuti vatengi vaone
Simbisa kuti template inopinda mukugadzira. Kana iwe usina kugutsikana, dzokera kune yechipiri nhanho, Kuita pre-gadzira sampuro uye kuyedza sampuro;
Kugadzira, Kuedza zvigadzirwa zvakapedza, Kutakura, Kutumira.
Gaofeng anotarisa kugadzirwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvehombodo uye mabhegi, uye kusvika pakugadzirwa kwedzimwe nguo dzakasarudzika.Gaofeng inotungamirwa nepfungwa yekuti kunaka ndiyo nzira yekurarama, vvhas vanga vachidzora kwazvo kugadzirwa.From pre-concourse yekupedza kuongorora kwechigadzirwa. , tiri kuedza kuva vakanyanya kunaka.
Isu inyanzvi mukupa inoshandurwa OEM masevhisi kune vatengi vedu, anopfuura zviuru zviviri zvemamita emaworkshops, Yese stitching yakadzora kufunga kwedu nezvebasa uye chinangwa cheesthetics.